यस्तो गणतन्त्र चल्दैन
शाश्वत शर्मा- -
होनहार नेता भनेको त, विदेशीका भरिया र स्वदेशमा व्यवसाय चलाउने पो रहेछन् । यिनका लागि राजनीति कहिले पनि सेवा र जिम्मेवारीवोध भएन । यी त तिल्के मारवाडीजस्तो हुनपुगे ।
लादिएको गणतन्त्र नचलने पक्का भयो । नेपालीले यस्ता नेताबाट गणतन्त्र चलाउने आशा र भरोसा टुटेको छ । किनकि यिनले ०६३ को परिवर्तनपछि हरेक दिन जनतालाई, देशलाई धोकामात्र दिएका छन् । देश र जनताका लागि कहिले बहस गरेनन् । विकास खन्न छाडेर जहिले भो चुपचाप बसेको राजतन्त्रको खोइरो खनेर पनि गणतन्त्र चल्छ ? व्यक्तिगत गालीगलौज ग¥यो, आलोचना ग¥यो, भ्रम छ¥यो, गणतन्त्र कार्यान्वयन भयो भन्यो । यस्तो बाँदरे चालाले पनि गणको कल्याण हुन्छ ?
विजयकुमार गच्छदारलाई २ वर्ष नदेख्ने प्रहरी, महिला बलात्कारमा मुछिने प्रहरीले पूर्व युवराजालाई हेलमेट नलगाएकोमा कारवाही गरेछ । हरेक दिन टोल टोलमा चोरी भइरहेको छ, गुण्डागर्दी हदै नाघिसक्यो, हप्ता उठाएर बस्ने प्रहरीले हेलमेटमात्र देख्न थालेछ । ठाउँ ठाउँमा सवारी रोकेर लाइसेन्स र ब्लुबुक चेक गर्छ र पैसा खान्छ प्रहरी । प्रहरीले बुझेको छैन– कोरोना कालमा यातायातले काम गरिरहेको छैन ? यति बेला पनि लादिएको गणतन्त्र खतरामा छ अनि अनेकन बखेडा झिक्न र उही राजतन्त्रतिर विषयान्तर गर्न खोजिएको छ । यसअघि जीवराम भण्डारीहरूमार्फत पदम ठकुराी, अच्यूतराज रेग्मीजस्तालाई टीभीमा बोलाएर राजतन्त्रको विरोध गराउँथे । आफूलाई राजावादी भनाउन चाहनेहरूले पूर्वयुवराजलाई तरूनीतिर ढल्केको, लागूपदार्थमा पल्केको देखाउने अनेक ठाउँमा लैजान्थे, देखाउँथे । राजसंस्थाको विरोधी आङकाजी शेर्पामात्र हो भन्ने भ्रम नरहोस्, निर्मल निवासका निकटेहरूलाई पनि प्रयोग गरिने गरेको छ । हिजो पर्याप्त लाभ लिनेहरू आज राजतन्त्र विरोधी देखिएका छन् । राजतन्त्र विरोधमा प्रयोग भएका छन् । अनि के चाहियो गणतन्त्रमा लुटिरहेकालाई, यसैलाई मुद्दा बनाइरहन्छन् ।
विषय कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको छ । ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म ७२ स्थानमा भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणको छ । एमसीसी नयाँ विषय हो । देशको सार्वभौमिकता खुम्च्याउने विषयमा राष्ट्रिय बहस चलाएर एकता निर्माण गर्न नसक्नेहरू हेलमेटमा अल्झिन पुगेका छन् । ससाना विषयमा अल्झेर यिनले राष्ट्र सिध्याउने भए । अहिलेको विषय दार्चुलाको थियो, विदेशीले नेपाली मारेको किन भनेर कोही बोल्दैनन् । दार्चुलाको पारू गाउँ, मालघाटबाट ३५ वर्षका जयसिंह धामी महाकाली नदी तुइनमा तर्दै थिए, भारत उत्तराखण्डका एसएसवीले तुइनको डोरी काटेर महाकालीमा खसालिदिए । यति गम्भीर राष्ट्रिय विषयमा बोल्ने साहस र यो मुद्दा उठाउने चासो कसैमा छैन । सिङ्गो नेपालको राज्यसञ्जाल हेलमेटमा अड्किएको छ, मानौं हेलमेट नलगाउँदा नेपाल चुर्लुम्मै डुब्यो ।
सबै छाडी पुच्छरमा हात भनेको यही हो ।
भारत नेपालमाथि हस्तक्षेप, अतिक्रमणपछि अब ज्यान लिन थालेको छ । २०७४ सालमा पनि दार्चुलाकै सिमानामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमा नमिच भन्दा गौतम गोविन्दको हत्या गरिदियो । देउवा सरकारले बोल्न समेत सकेन । अहिले जय सिंह धामी मारिएका छन्, ५ दलीय मोर्चाले गणतन्त्र र संविधान बचायौं भन्दै गठन गरेको देउवा सरकारले नेपाली मारिदा बोल्न सकेनन् । यही हो गणतन्त्र ? यस्तै हुन्छ गणतन्त्र ? मर्यादा र लोकलज्जा नभएको पनि गणतन्त्र हुन्छ ?
आङ्काजीहरूले रोइलो गर्नु भनेको प्रायोजित हो, विषयान्तर गर्ने प्रयास हो । यस्तो चालले गणतन्त्र बच्दैन । गणतन्त्र भनेको गण प्रधान व्यवस्था हो । गण स्वदेशमै मारिने, विदेशमै मारिने, तुइन काटेर मारिने अनि गणतन्त्र तमासा हेरेर हाँस्ने, राजतन्त्रमाथि विष बमन गरेर गणतन्त्र चलाउने । के हो यो गाईजात्रा ?
गणले दुई तिहाई बहुमत दिए, चलाउन सकेनन् । रङ्ग न ढङ्गका गणतन्त्रवादीहरू ? लोग्ने प्रधानमन्त्री हुनासाथ श्रीमतीले हरेक पदका लागि मोलमोलाई गर्ने, संसद र संघीय सरकारमै ६ देखि ५५ जोडी रहने, लोग्ने मरे स्वास्नीलाई, स्वास्नी हटे लोग्नेलाई सत्तामा प्रतिनिधि बनाउनु पर्ने ? गण कता छ, १२६ जातिको प्रतिनिधित्व कसले गरेका छन् ? कहिले विचार मन्थन भयो ?
जे भयो, भ्रष्टाचारमात्र भयो । जे भयो, अपराधिकतामात्र भयो ।
त्यसैले त ७६१ सरकार छन्, कुनै सरकार पनि स्वच्छ छैनन् । हरेक सरकार भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका छन्, डामिएका छन् । गणतन्त्र हाँक्ने कुनै पनि नेता नैतिकवान छैनन् । नैतिक स्खलन भएका आचरणविहीनले चलाएको गणतन्त्र हुने छाडा हो, छाडा नै छ । निष्पक्षता र स्वतन्त्र कोही पनि छैनन् । ताक परे संविधान हो यिनका लागि । शक्तिका पुजारी हुन्, सत्ताका व्यापारी हुन् । देशको मायाँ र जनताप्रति जिम्मेवारीको ख्याल नै छैन । यिनलाई हेक्का रहोस्, जनताले बुझेका छन्, मौन बसेका मात्र हुन् । यो भूकम्पअघिको मौनता हो ।